Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Nnukwu ụlọ ọrụ mmepụta ihe na-ese n'elu mmiri n'ụwa
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • omenala • Akụkọ Ọchịchị • investments • News • Ịrụ ọrụ • Akụkọ na -agbasa na Saudi Arabia • Tourism • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
Nnukwu ụlọ ọrụ mmepụta ihe na-ese n'elu mmiri n'ụwa bụ OXAGON, ma dị na Saudi Arabia.
Ọ na-ewe ọhụụ nke Royal Highness Mohammed bin Salman iji kwalite nnukwu ọrụ a site na ike mmeghari 100%.
Ike dị ọcha, ngwa ngwa ọkọnọ ọgbara ọhụrụ na OXAGON iji kwado ndị mmekọ azụmahịa
OXAGON na-anabata ndị ọsụ ụzọ mmepụta ihe malite na 2022
Ụlọ ọrụ asaa dị mkpa na-akwado site na ume ọhụrụ iji kwado mmepe mmepụta ihe
Nhazi octagon pụrụ iche na-akwado mmepe Economy Blue nke NEOM
Onye isi ala ya Mohammed bin Salman, Onye isi ala na Onye isi oche nke NEOM Company Board of Directors, taa mara ọkwa nguzobe nke OXAGON, na-akpụ a ọzọ na-adọ nke NEOM si master plan na-anọchi anya a radical ọhụrụ nlereanya maka n'ọdịnihu mmepụta center, dabere na NEOM si azum nke redefining ụzọ ụmụ mmadụ na-ebi na-arụ ọrụ n'ọdịnihu.
Na emume nke ọkwa ọkwa maka nguzobe obodo ahụ, Royal Highness kwuru: "OXAGON ga-abụ ihe na-akwalite uto akụ na ụba na iche iche na NEOM na Alaeze ahụ, ịga n'ihu na-ezute ebumnuche anyị n'okpuru Vision 2030. OXAGON ga-enye aka n'ịkọwapụta ụzọ ụwa si eme mmepe ụlọ ọrụ n'ọdịnihu, na-echebe gburugburu ebe obibi na-ekepụta ọrụ na uto maka NEOM. Ọ ga-enye aka na azụmaahịa na azụmaahịa mpaghara Saudi Arabia, ma kwado imepụta ebe ọhụrụ maka mbugharị azụmaahịa zuru ụwa ọnụ. Obi dị m ụtọ ịhụ na azụmahịa na mmepe amalitela n'ala ma anyị na-atụ anya mgbasawanye obodo ahụ ngwa ngwa."
Nadhmi Al-Nasr, CEO nke NEOM kwuru, sị: "Site na OXAGON, a ga-enwe mgbanwe dị mkpa n'otú ụwa si ele ụlọ ọrụ mmepụta ihe. Ihe na-agba anyị ume bụ ịhụ ịnụ ọkụ n'obi nke ọtụtụ ndị mmekọ anyị gosipụtara mmasị ịmalite ọrụ ha na OXAGON. Ndị ọsụ ụzọ mgbanwe a ga-eguzobe ụlọ nrụpụta, nke ejiri teknụzụ kachasị ọhụrụ na ọgụgụ isi rụọ ọrụ, iji nweta nnukwu mmụba maka oge a n'ime mgbanwe nrụpụta nke anọ. Dị ka ọ dị na LINE, OXAGON ga-abụ obodo nwere ọgụgụ isi nke na-enye ndị bi na ya ibi ndụ pụrụ iche. "
N'ịbụ nke nwere nnukwu mpaghara dị na ndịda ọdịda anyanwụ nke NEOM, gburugburu obodo mepere emepe gbadoro ụkwụ na ọdụ ụgbọ mmiri agbakwunyere na ọdụ ngwa ọrụ nke ga-edobe ọtụtụ ndị bi n'obodo ahụ. Nhazi octagonal pụrụ iche na-ebelata mmetụta na gburugburu ebe obibi ma na-enye ojiji ala kachasị mma, nke fọdụrụnụ na-emeghe iji chekwaa 95% nke gburugburu ebe obibi. Ihe na-akọwapụta obodo ahụ bụ ihe owuwu kachasị na-ese n'elu ụwa, nke ga-abụ ebe etiti NEOM's Blue Economy wee nweta uto na-adịgide adịgide.
OXAGON na-akwado otu nkà ihe ọmụma na ụkpụrụ nke THE LINE (nke ekwuputara na Jenụwarị 2021) ma ga-enye ndụ pụrụ iche n'ụzọ kwekọrọ na okike. N'ịbụ nke dị n'akụkụ oke osimiri uhie dị nso na Suez Canal, nke ihe dịka 13% nke azụmahịa ụwa na-agafe, OXAGON ga-abụ otu n'ime ọdụ ụgbọ mmiri kachasị elu nke nkà na ụzụ n'ụwa nwere ọdụ ụgbọ mmiri jikọtara ọnụ na ọdụ ụgbọ elu.
OXAGON iji tọọ akara nrịbama zuru ụwa ọnụ maka teknụzụ dị elu
OXAGON ga-eguzobe ọdụ ụgbọ mmiri mbụ zuru oke n'ụwa na gburugburu ebe obibi ọkọnọ maka NEOM. A ga-ejikọta ọdụ ụgbọ mmiri, ngwa agha na ebe a na-ebufe ụgbọ oloko, na-enye ọkwa nrụpụta ọkwa ụwa na ikuku ikuku net-efu, na-esetịpụ akara ngosi zuru ụwa ọnụ na nnabata nke teknụzụ na nkwado gburugburu ebe obibi.
Ngwa ngwa ngwa na ngwa ngwa nke anụ ahụ na dijitalụ na sistemu ngwa ngwa ga-enye ohere maka nhazi oge, na-ebute nnyefe echekwara n'oge, arụmọrụ na ọnụ ahịa maka ndị mmekọ ụlọ ọrụ.
Na isi OXAGON ga-abụ nnabata nke teknụzụ kachasị elu dị ka ịntanetị nke ihe (IoT), ngwakọta igwe mmadụ, ọgụgụ isi na amụma amụma, na robotics, nke niile jikọtara na netwọkụ nke ebe nkesa na-akpaghị aka na nke kwụụrụ onwe ya. Ngwongwo nnyefe nke-mile ikpeazụ iji chụpụ ebumnobi NEOM nke imepụta ụdọ ọkọnọ na-enweghị nkebi, ọgụgụ isi na nke ọma.
Ngalaba asaa ohuru ohuru, ike mmeghari ohuru 100% kwadoro
Obodo net-zero ga-eji ike dị ọcha 100% kwadoro ma bụrụ ebe dị mkpa maka ndị isi ụlọ ọrụ na-achọ ịsụ ụzọ mgbanwe iji mepụta ụlọ ọrụ dị elu ma dị ọcha nke ọdịnihu.
Ngalaba asaa na-etolite nucleus nke mmepe mmepụta ihe nke OXAGON, yana ihe ọhụrụ na teknụzụ ọhụrụ na-emepụta ntọala dị mkpa maka ụlọ ọrụ ndị a. Ụlọ ọrụ ndị a bụ ike na-adịgide adịgide; ngagharị nke kwụụrụ onwe; ihe ọhụrụ mmiri; mmepụta nri na-adigide; ahụike na ịdị mma; teknụzụ na nrụpụta dijitalụ (gụnyere nkwukọrịta, teknụzụ oghere na robotics); na usoro ihe owuwu nke oge a; niile kwadoro site 100% ume ọhụrụ ume.
Obodo ga-ejikọta ya na okike
Ọtụtụ n'ime atụmatụ nke LINE nke na-enye ndụ pụrụ iche na-egosipụta n'ime obodo mepere emepe nke OXAGON. Obodo ga-enwe ike ịgagharị, ma ọ bụ site na ngagharị nke hydrogen. A ga-ewu ụlọ ọrụ na-adigide gburugburu obodo, na-ebelata oge ị ga-eji na-aga njem ma na-enye ndụ pụrụ iche na okike jikọtara ya na gburugburu obodo mepere emepe.
Agụmakwụkwọ, Nchọpụta na Innovation maka ụlọ ọrụ zuru ụwa ọnụ na-asọ mpi
OXAGON ga-emepe emepe emepe a n'ezie okirikiri akụ na ụba na a imekọ ihe ọnụ gburugburu ebe obibi wuru gburugburu nnyocha na ọhụrụ: OXAGON's innovation campus will host the Education, Research and Innovation (ERI) ecosystem to rival guzobe zuru ụwa ọnụ centers.
Mmepe nke OXAGON na-aga nke ọma na atụmatụ na-aga n'ihu maka nnukwu ụlọ ọrụ mmepụta ihe. Ụlọ ọrụ ndị a gụnyere ọrụ hydrogen kacha ukwuu n'ụwa gụnyere ngwaahịa ikuku, ike ACWA na NEOM n'ime ọrụ nke atọ; ụlọ ọrụ ihe owuwu modul kachasị na ụwa nke nwere Gulf Modular International; na nnukwu ụlọ ọrụ data hyperscale na mpaghara, njikọ aka n'etiti FAS Energy na NEOM.
Site na usoro nhazi usoro kachasị mma nke ụdị maka nkwado oke, OXAGON ga-eto ngwa ngwa ma nabata ndị nwe ụlọ mbụ ya na-emepụta na mmalite nke 2022.
NEOM bụ ihe na-eme ngwa ngwa nke ọganihu mmadụ na ọhụụ nke ihe Ọdịnihu Ọhụrụ nwere ike ịdị ka. Ọ bụ mpaghara dị na ugwu ọdịda anyanwụ Saudi Arabia na Oké Osimiri Uhie a na-ewu site na ala dị ka ụlọ nyocha dị ndụ - ebe ịzụ ahịa ga-edepụta usoro maka Ọdịnihu Ọhụrụ a. Ọ ga-abụ ebe njem na ebe obibi maka ndị na-arọ nrọ ma chọọ ịbụ akụkụ nke iwulite ụkpụrụ ọhụrụ maka ịdị ndụ pụrụiche, na-ekepụta azụmaahịa na-eme nke ọma na ịmaliteghachi nchekwa gburugburu ebe obibi.
NEOM ga-abụ ebe obibi na ebe ọrụ nye ihe karịrị otu nde ndị bi na gburugburu ụwa. Ọ ga-agụnye njikọ chiri anya, obodo na obodo nwere ọgụgụ isi, ọdụ ụgbọ mmiri na mpaghara ụlọ ọrụ, ebe nyocha, ebe egwuregwu na ntụrụndụ, na ebe ndị njem nlegharị anya. Dị ka ebe a na-emepụta ihe ọhụrụ, ndị ọchụnta ego, ndị isi azụmahịa na ụlọ ọrụ ga-abịa nyocha, ịmepụta na ịzụ ahịa teknụzụ na ụlọ ọrụ ọhụrụ n'ụzọ dị egwu. Ndị bi na NEOM ga-ejikọta ụkpụrụ mba ụwa ma nabata omenala nke nyocha, ihe ize ndụ na ihe dị iche iche - ihe niile na-akwado iwu na-aga n'ihu nke kwekọrọ na ụkpụrụ mba ụwa ma na-eme ka akụ na ụba dịkwuo elu.